Glass dị oké mkpa mmanụ karama Manufacturers, suppliers - China Glass mkpa mmanụ karama Factory
30ml amba iko mkpa mmanụ karama na tamper doro mkpuchi
Epeepe amber 30ml nwere mkpuchi mkpuchi akaebe bụ akụkụ nke usoro karama anyị. Ejiri iko amba dị ọcha, ọ dị mma maka gị ịhazi iji jigharị karama ndị a. Ọ dịkwa ezigbo mma maka ịnye ọmarịcha mma maka ngwaahịa gị. Amber na-enyekwa nchebe UV kachasị elu maka agba karama anyị niile na-acha odo odo, na-eme ka ọ dị mma maka ijide ngwaahịa na ngwọta dị mma.
15ml kpochapụrụ mmanụ karama mmanụ dị mkpa na nwa pọmpụ mmiri na-acha nchara nchara
Simplezọ dị mfe ma dị ọcha iji kpochapụ ihe ngwọta site n'otu ebe ruo ebe ọzọ na-enweghị ihe mkpofu ọ bụla. Mgbe jikọtara ya na 15ml transperent transperent karama na iko pipette, ọ nwere ike inye a mma na a pụrụ ịdabere na nkwakọ nhọrọ maka gị aromatherapy na mkpa mmanụ. Mpempe akwụkwọ transperent bụ nke usoro karama anyị, yabụ biko jide n'aka na karama ị ga-enweta ga-adị oke mma ma dịgide.
100ml cobalt-acha anụnụ anụnụ iko mkpa mmanụ dropper karama na nwa àmà CR mkpuchi
Jiri karama nwere iko ọkpọkọ iji chekwaa ọtụtụ ngwaahịa na ihe ngwọta, gụnyere mmanụ dị mkpa na mmanụ ụgbọ mmiri, isi na-esi isi, ọgwụ ifuru Bach, ọgwụgwọ ahụike, na ndị ọzọ. Igwe iko na-acha anụnụ anụnụ bụ ụzọ dị mfe ma dị irè iji nye ngwaahịa gị ọdịdị dị elu, wee hụ na gị na ngwaahịa gị na-aga n'ihu asọmpi ahụ ma na-adọta uche nke ndị ahịa.
50ml doro anya karama na gold aluminum ịgba mgbapụta
Chebe, gosi ma mee ka isi gị na mmanụ gị na karama iko Easypack. Nke a 50ml doro anya iko ịgba karama bụ anyị dropper usoro na dị nnọọ mma maka ahụ ike na ọgwụ na ngwaahịa. Piel iko nwere ike melite ngwaahịa larịị na nọchiri ihu. Ọ dịịrị gị na ndị ahịa gị ịmata ngwa ngwa dị iche iche / isi. Akụkụ kwụ ọtọ nke kalama ahụ na-eme ka ọ dị mfe itinye akara ngosi gị / nbipụta ihuenyo gị.
20ml karama green mkpa mmanụ karama na orifice reducer dropper mkpuchi
Anyị iko dropper karama usoro ga-hụ ezi nchebe maka gị ngwaahịa, zuru okè anya na njikere maka ndị ahịa gị. Igwe karama a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụdụ 20ml na mkpuchi okpu ọ bụghị naanị na ọ dị ịtụnanya, mana ọ na-enyekwa ụzọ dị mma iji wepụta ngwaahịa karịa nke ọma. Nke a bụ n'ihi ntinye ngwa ngwa nwayọ na okpu, nke na-enye ohere ka ewepụta ngwaahịa gị n'ụdị ụmụ irighiri mmiri. Ezigbo mma maka mmanụ dị oke ọnụ na ngwakọta aromatherapy.
Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Iko karama na ịgba nfuli, Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Clear Glass mgbapụta karama,